Motorola RAZR၊ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားသည့်ခေါက်နေသောပုံစံ။ | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Motorola က, NOTICIAS
အများကြီးတာရှည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ခေါက်စမတ်ဖုန်း။ ပို။ ပင်ဒါမကြာသေးမီလများအတွင်း။ အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးတော့ဒါကိုသိပြီးနောက်မှာ၊ Huawei နှင့် Samsung ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်တွေကငါတို့မျှော်လင့်ထားတာလား။
ကျနော်တို့တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သကဲ့သို့ စမတ်ဖုန်းများသည်အရွယ်အစားကြီးထွားမှုကိုမရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သောရာသီအချို့ကတက်ဘလက်ထက်ပိုကြီးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အသုံးပြုသူအဆင့်မှာအတွေ့အကြုံပိုကောင်းတဲ့အရာ။ ဒါပေမယ့်ဘာလဲ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သည်.
1 Motorola RAZR သည်စမတ်ဖုန်းကြီးကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေသည်
2 Mate X နဲ့ Galaxy Fold ကလိုအပ်တာထက်ပိုကြီးလား။
Motorola RAZR သည်စမတ်ဖုန်းကြီးကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေသည်
ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးသည်ဖန်သားပြင်ကိုခေါက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းကြားသိရသောအခါကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်မှားယွင်းစွာတွေးခဲ့ကြသည်။ ငါတို့တွေးခဲ့ကြတယ် ဒီနည်းပညာရှိခြင်းကငါတို့လုပ်လိမ့်မယ် ရက်ရက်ရောရောမျက်နှာပြင်ဖုန်းများသည်နေရာတစ်ဝက်ယူလိမ့်မည်။ တစ်ခုခု ဤနည်းကို Huawei (သို့) Samsung မှအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါ.
Samsung Galaxy Fold နှင့် Huawei Mate X နှစ်မျိုးလုံး လက်ရှိဖန်သားပြင်၏အရွယ်အစားကိုနှစ်ဆတိုးရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယခင်ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆ လက်မအရွယ်ရှိသည့်နေရာနှင့်ယခု ၁၂ လက်မဖန်သားပြင်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထိုကဲ့သို့သော "သေးငယ်သော" ကိရိယာတွင်ထိုကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ရှိခြင်းကိုဂုဏ်ပြုသောသူတို့သည်ရှိလိမ့်မည်။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းကိုဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှာသယ်ဆောင်ရတာမလွယ်ကူဘူးလား။ ဒါ့အပြင်ဒီကိရိယာနှစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသိနိုင်ခဲ့တာတွေကနေ အထူ ယင်း၏ သိသိသာသာတိုးမြှင့်။ ဒါဆိုငါတို့ Galaxy Fold ကိုအိတ်ဆောင်ထဲထည့်ထားလို့ရမလား။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအဖြေဖြစ်ပါက "မိုဘိုင်း" ဖုန်း၏မူလစိတ်ကူးသည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားသည်မဟုတ်လား။
Mate X နဲ့ Galaxy Fold ကလိုအပ်တာထက်ပိုကြီးလား။
၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်အထူနှင့်အထူးသဖြင့်သူတို့ထဲကတ ဦး တည်းရရန်ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မည်အထူးသဖြင့်စျေးနှုန်းများပေးသော။ ကျနော်တို့ကခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားထုတ်လုပ်သူသူတို့ကိုယ်သူတို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ထက်ပိုမိုကန့်သတ်လိမ့်မည်။ စီးပွားရေးအပိုင်းသည်အဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာအများကြီးအရေးပါလိမ့်မယ် ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ပုံမှန်အသုံးပြုရန်ဖုန်းကိုသယ်ဆောင်ခြင်းသည်လက်တွေ့ကျသည်ဟုတစ်စုံတစ်ယောက်ကယူဆနိုင်သည်.
ဤအခြေအနေများကြောင့်လူအများကြည့်ရှုရန် Motorola RAZR အသစ်၏ဒီဇိုင်းသည်ခေါက်ထားသည့်ပုံစံကိုယုံကြည်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးရှိပါသလား။ အရွယ်အစားတူသို့မဟုတ်အရွယ်အစားတူ။ အရွယ်အစားတူသောလက်ရှိစျေးကွက်ရှိဈေးကွက်နှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သမျှအားလုံးနီးပါးအတွက်လုံလောက်သည်။
ဒီထက်အများကြီးအသေးစိတ်ခြင်းမရှိဘဲ, သိ el Motorola RAZR ကတော့ပိုပြီးစျေးနှုန်းချိုသာပါလိမ့်မယ် အဆိုပါဖျောပွခေါက်ထက်။ ဒီပုံစံကစမတ်ဖုန်းတွေကိုသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေတယ်။ ၆ လက်မဖန်သားပြင်ရှိစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်မည်သည့်အိတ်ဆောင်တွင်မဆိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါတို့တွေ့ရတယ် RAZR သည်ပြည်သူလူထု၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်ပိုမိုဆင်တူသည့်ခေါက်သိမ်းထားသောအယူအဆသစ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Motorola RAZR, ငါတို့မျှော်လင့်ထားသည့်ခေါက်နေသောပုံစံ
ငါနင့်ကိုချစ်တယ် moto !!! အားလုံးအချိန်ကုန်ဆုံးဖုန်း ... ငါစက်မကြာခင်မှာထွက်လာတာကိုငါနှစ်သက်ချင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အာဂျင်တီးနားအတွက်ကံဇာတာဖြစ်ပါတယ် ... ???
Jose Manuel Gutierrez Diaz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော်တို့မှာ Motorola အမြဲရှိခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
José Manuel GutiérrezDíazအားပြန်ပြောပါ
Hello Miguel, စျေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ဘာမှမရှိဘူး။ သူတို့ကြေငြာလိုက်တာက Samsung နဲ့ Huawei တို့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာလိမ့်မယ်။ သူတို့အားထက်စျေးနှုန်းချိုသာပေမယ့်အလွန်လွယ်ကူသည်😉
Jorge Williams ဟုသူကပြောသည်
ငါ Motorola ရချင်တယ်
ဟိုင်း Jorge၊ ဒီနှစ်မကုန်ခင်ထွက်မယ်လို့ထင်တယ် တရားဝင်ဖြန့်ချိသည့်နေ့ရက်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်သင့်အားအကြောင်းကြားပါမည်။
Giovanni Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
သုံးစွဲသူများအမှန်တကယ်လိုချင်သည့်အချက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအတည်ပြုခြင်း၊ အသုံးပြုသူများစွာအော်ဟစ်ရန်လိုအပ်မှုကိုသူဖွင့်ဟပြောဆိုနိုင်ခြင်း၊ Motorola သည်ဤပစ္စည်းကိရိယာကိုအဘယ်ကြောင့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအတွက်မည်မျှပေးမည်နည်း။
Giovanni gonzalez အားပြန်ပြောပါ